निर्मला पन्त घटना प्रकरणमा निलम्बित एसपी बिष्टसँग वार्ता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ३ महिना वितिसकेपनि अपराधी पत्ता लागेको छैन । निर्मलापन्तको घटनामा कञ्चनपुर प्रकरणमा निलम्बित एसपी डील्लीराज विष्ट निलम्बनमा परेका छन् । घटनासँग पनि उनका छोरालाई जोडेर पनि हेरिएको छ । के भन्छन् विष्ट घटनाबारे सक्षिप्त कुराकानी
घटना घटेको बारेमा तपाईको जानकारीमा कसरी आयो ?
असार घटना १० गते दिउँसो भएको देखिन्छ । निर्मला पन्त हराएको जानकारी राती १२ः ३५ मा वडा प्रहरी कार्यालयमा भएको हो । मलाई बिहानमात्रै घटनाको जानकारी भएको हो । भोलि बिहान ४ बजे ट्युसन पढ्न गएको घरमा जानेगरि वडा प्रहरी कार्यालयसँग सहमति भयो । बिहानबाट खोज्ने काम भयो ।
किन राती नै खोज्न गएन प्रहरी ?
त्यो चै वडा प्रहरी कार्यालयको कार्यक्षेत्र हो । सहीसापले जे निर्णयगर्नुभयो त्यसमा मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । उहाँ त्यहाँको स्थानिय मान्छे पनि हो । खेतबारी पनि उहाँकै हो । निर्मलाका बुवा आमाले नै भोलि आउने सहमति गरेको सहीसापले मलाई जानकारी दिएको हो । मलाई जानकारी बिहान मात्रै भएको हो ।
राती नै किन खोज्न सकिएन ?
पहिलो कुरा बुवाआमासँग वडाप्रहरी कार्यालयको सहमति भइसकेको छ । अर्को कुरा कञ्चनपुरमा केटाकेटीहरु भागेर जाने खोजतलासका लागि निवेदन लिएर आउने गरेको देखिन्छ । उहाँको बुवाआमा पनि सामान्य रुपमा नै आउनु भएको थियो । फेरि केटीहरु नै भएको ठाउँमा गएको भनेपछि त्यसलाई त्यही रुपमा हेरियो । घटना घटेको अनुमान कसैले नगरेकाले राती नै जानुपर्छ थियो तर प्रहरी गएन ।
तपाई प्रमाण नष्ट गर्न किन लागेको त ?
चार दिनसम्म शव अगाडी राखेर छलफल गर्दा गर्दै अनुसन्धन गर्न पाइएन । चारदिनपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । प्रमाण नष्ट गरेको कुराकाे सन्दर्भमा । लुगामा हिलो लागेका थियो । शव हिलोमा डुबेको अवस्था थियो । त्यो कुरा म निलम्बनमा परेपछि मात्रै बाहिर आएको छ । त्यतिबेला किन आएन ?
पेन्टी किन गायव भयो त ?
नपखालेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसबाट के प्रमाण नष्ट भयो ? डिएनए परिक्षण भइसेको छ । मलाई त प्रमाण नष्ट भएको जस्तो लाग्दैन । कुनैपनि हालतमा प्रमाण नष्ट भएको छैन । लाज छोप्नका लागि कपडा प्रयोग गरिएको हो । काम गर्दा तुर्टी भयो होलान म स्वीकार गर्छु तर प्रमाण नष्ट गरिएको छैन ।
बम दिदीबहिनीलाई किन अनुसन्धान गरिएन ?
बम दिदीबहिनीलाई पक्राउ गरेर २४ घण्टा हिरासतमा राखिएको छ । बम दिदीबहिनीमाथि शंका स्वभाविक छ । तर, त्यहाँ कुनै प्रमाण नभेटिदा जर्बजस्ती त नै होस त भन्न भएननी त ।
आरोप तपाई वरीपरी नै देखिन्छ ?
जसले आरोप लगाएको छ उसले प्रमाणित गरे हुन्छ नी त ।
दिलिप बिष्टलाई किन पक्राउ गरेको त ?
दिलीप बिष्टलाई शंकाका आधारमा पक्राउ गरिएको हो । उनले आफुले त्यो घटना घटाएको स्वीकार गरेका छन् । तर होइनन भने किन स्वीकार गरे त्यो थप छानविनको विषय होला अथवा उनले जान्ने कुरा हो ।
तपाईको छोरा र मेयरको भतिजाको कुरा के हो ?
मेरो छोराले त्यो ठाउँ पनि देखेको छैन । बम दिदीबहिनीलाई चिनेको पनि छैन । निर्मला पन्तलाई पनि चिनेकै छैन । जुन मान्छेसँग चिनजान नै छैन उसलाई जर्बजस्ती जोड्नु अपराध हो ।
ओपेरा होटेलको फोटोसुट चै के हो ?
त्यो फोटो सुट प्रहरी कार्यालयमा रेकर्डमा छ । हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ निर्मला पन्त पनि थिइन भन्ने कुरा गलत हो । करिब ५–६ जना थिए । त्यो पाटो प्रष्ट भइसकेको छ । मैले निलम्बनमा भएपनि अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छु ।
तपाईको अनुसन्धानले के भन्छ त ?
त्यहाँ लागु औषधको अखडा भएको ठाउँ हो । दुर्व्यसनीहरु बस्ने ठाउँ चै त्यो थियो । केटाकेटीहरु जम्मा हुने ठाउँ पनि हो । निर्मला मेरो पनि छोरी हो । म त्यही ठाउँको व्यक्ति हो । अपराधी पत्ता लगाउन मेरो तर्फबाट सहयोग हुन्छ ।